Abalobi Tears Cognac Cask Qeda | Irish Whiskey .com
Ikhaya » 3 Pooka Irish Whiskey » Abalobi Tears Cognac Cask Qeda
Ngibhale obuncane esingangesonto noma kanjalo edlule ku ibhulogi indawo yami eyinhloko WhiskeyBlogger.com mayelana izindaba ngokushesha futhi ezingalindelekile we ekuhlukaniseni izindlela phakathi Walsh Whisky futhi ezinkulu abalingani babo utshalomali Ilva de Saronno kusukela e-Italy ababa usekelwa kakhulu yezindleko ukwakha amahle distillery izindlu ngesikhathi Royal Oak eduze Carlow.
Walsh Whisky Ujika Ngaso Carlow Cross Roads – WhiskeyBlogger.com
Kwathi gidi futhi ekujabulela ukuqinisekisa, ukuthi kudabukisa Nokho wahlukanisa kwaba, kwaba zonke ngempela ngokuthula sohlobo zebhizinisi indlela. okubaluleke kakhulu, lalilikhulu ukuzwa ukuthi eziningi abangane bami likagologo oxhumana nabo kusuka Carlow bonke yini uphephile futhi uvikelekile ku umsebenzi wabo esikhathini sangemva kwalokho.
Okuningi ezinhle kuleli sonto futhi ubufakazi bokuthi ukuphila kuyaqhubeka, Zayithela ukuthi Walsh Whisky nje baye ikhiphe Cognac Cask ukubonakaliswa Abalobi zabo yisakhiwo sodumo Tears Premium Irish Whiskey brand. Okuhle nakakhulu, Ngajabula ukuzwa ukuthi lo Abalobi Izinyembezi wayelandela Walsh Whisky Isignesha iphrofayela kangaka okuthiwa “champagne Blend” ka Single Malt futhi Single Embizeni Whiskeys Namanje Irish, okuyinto ngakho oyingqayizivele synonomous nge sha Walsh Whisky kanye Bernard Walsh.
I am a fan enkulu yale nhlanganisela futhi wajabula ukufaka I Irishman Abasunguli Reserve a Irish Whiskey yokunambitha Umcimbi wakamuva ngamazwe ukuthi Ngagijima e Cairo.
Lokhu kwalokho zamuva Abalobi’ Izinyembezi yethusi Embizeni esitebeleni is edition elinganiselwe usuphelile 12 French Limousin emiphongolweni ye-oki. Le misindo iye ayoliswe ngoba phakathi neshumi nanhlanu edlule nge Deaux XO Cognac kusukela Legaret zomndeni e-South West France. Loku kusikhumbuta nambili , inani Whisky izinkulumo kusukela Walsh Whisky ngaphansi kwabo I Irishman futhi Abalobi’ izinyembezi amalebula.
Kwethulwa Izinyembezi Writers 'yethusi Embizeni – DEau XO Cognac Cask Qeda, Walsh Whisky Umnikazi – Umqondisi Bernard Walsh wachaza ubuciko ukuthi esenyukele zonke esiteji yokuthuthukisa nogologo sika:
"Konke mayelana le nkulumo ivela esezingeni okokufaka, kusukela ingxube ethu eziyingqayizivele kathathu distilled Malt Single nasebekhulile Single Embizeni Namanje whiskeys, kuze kube sekupheleni French (Limousin) Emiphongolweni ye-oki kusukela odumile umndeni cooperage ka Allary eziye ayoliswe yi Legaret lomndeni dEau XO Cognac ngoba phakathi 10 ukuze 15 iminyaka. Konke yakha kumuzwa ekhethekile siyaziqhenya kakhulu ukubeka igama ethu omndeni futhi ziyajabula ukwabelana nabalandeli we Writers 'Izinyembezi iphothifoliyo, kanye labo kungenzeka uzama a Writers 'Izinyembezi inkulumo okokuqala kakhulu. impilo!"
yokunambitha amanothi olusemthethweni Izinyembezi Abalobi sika yethusi Embizeni dEau XO Cognac Cask Qeda.
Ikhala: amanothi amnandi of eliphakathi kwe abazingelwa, ihlobo amajikijolo, Amacebo lamagilebhisi asanda agxishiwe ezisawolintshi elikhuhluziwe.
Nambithani: olubushelelezi AMAZING rich ushokoledi ukugudlisela.
Qeda: Floral nezithelo ako wenze indlela i sekugcineni kwesithathu ngokugqamile.
Ngibheke phambili elizwa ngokwami ​​ngesikhathi esifanele, kodwa ongabikezela ngokuzethemba, okuqinile 3 Pooka Premium Irish Whiskey isilinganiso.
Nakuba Walsh Whisky itholakala phezu 50 amazwe emhlabeni jikelele, lokhu 46% ABV, kathathu distilled, non-peated, super-premium nogologo itholakala izimakethe ayisishiyagalombili nje emhlabeni wonke kuhlanganise USA, Ireland, Izikhangibavakashi nokudayisa (Ireland), Germany, Holland, Canada, France & UK. I RRP kuyinto € 74,99 / STG £ 67,99.
Kuhle ukubona Walsh Whisky ukuqalisa enjalo isisho umxhwele kangaka ngokushesha ngemva ukuzimela ezintsha. Kwaphinda lokho, Ngithanda sengathi Bernard, nomndeni wakhe kanye usebenza kokubili Walsh Whisky and Royal Oak Distillery impumelelo engcono kakhulu futhi okuqhubekayo 2019 futhi esikhathini esizayo.
Irish Whiskey Auction e Umsizile Zoe Murphy Isikhalazo
Amathegi: Bernard Walsh yethusi EmbizeniCarlowcognac QedaDEau XO CognacFrench emiphongolweni ye-okiIlva saronnoI IrishmanWalsh Whiskyabalobi izinyembeziIzinyembezi Writers 'yethusi Embizeni